Cambaarayn ka socota Guddiga Dhexe ee Qabanqaabada AWDAL STATE « CEELBARDAALENEWS.COM
« Awdalstate ha jirtoo ha joogto ka naxoow nafta waa.Waa Da’samo cusub noolaada oo guulaysta
XAFLADII AWDAL STATE EE MINNESOTA »
Cambaarayn ka socota Guddiga Dhexe ee Qabanqaabada AWDAL STATE
April 3 – (Ceelka-)-Guddiga Dhexe ee Qabanqaabada AWDAL STATE wuxuu warar lagu kalsoon yahay ku helay in taariikhdu markay ahayd Abril 02, 2011 magaalada weyn ee Borama si sharci darro ah loogu xidhxidhay weriyayaal u warrama website-yada u adeega bulshada caalamka ee ku hadasha Afka Soomaliga, arday iyo qaar ka mid ah dadweynaha Awdal State.
Suxufiyiintaas, ardaydaas iyo xubnahaas bulshadu ma garanayaan sababta loo xidhay ee sharaftoodii gaar ahaaneed meel loogaga dhacay.
Guddiga Dhexe ee Qabanqaabada Awdal State wuxuu halkan uga caddaynayaa ummadda Soomaaliyeed iyo Aduunweynahaba in Guddigu ka xun yahay xadhiga weriyayaashaas, ardaydaas iyo xubnahaas bulshada.
Guddiga Dhexe ee Qabanqaabada Awdal State wuxuu cambaarayn laxaad leh dusha uga tuurayaa xubnaha ka tirsan maamulka naafada ah ee haatan ka jira Awdal State, daba-dhilifkana u ah maamul isku-sheega cunsuriga ah ee jabhada SNM ee Burco.
Guddiga Dhexe ee Qabanqaabada Awdal State wuxuu aad uga xun yahay cabudhinta, cadaadiska iyo cagajugleynta hadh iyo habeen lagu hayo bulsho weynta Awdal State.
Xeerka xuquuqul-islaamka caalamiga ah ayaa si cad u qeexaya in qof walba xaq u leeyahay:
1. fikirkiisa gaarka ah, kuna dhawaaqi karo, qorina karo.
2. la xidhiidhka, la shirida iyo la socoshada qofka iyo kooxduu doono.
3. tegida iyo u safridda meeshuu doono ee wadankiisa.
4. degida, ku noolaanshaha iyo ka shaqaysiga meel kasta ee wadankiisa.
5. in aan sabab la aan looga qadi karin xoriyadiisa.
Waxaan ogsoonahay in bulsho weynta Awdal state deganaan lu laayiin dhulkoodii iyo ciidoodii, kana shaqaysan laayiin dad yar oo u adeegaya xukunka fadhiidka ah ee SNM ee Burco.
Hadaba, Guddiga Dhexe ee qabanbaabada Awdal State wuxuu digniin siinayaa dadkaas yar ee aan kor ku soo sheegay, wuxuunu Guddigu leeyahay Awdal State waabaa u beryey, geedi-socodkeeda xalaasha ahna cid joojin kartaa ma jirto.
Sidaa awgeed, wuxuu Guddigu la socodsiinayaa shakhsiyaadkaas xaaraanta u adeegayain la idinla socdo, talaabadaad qaadaana berri qof walba si gaar ah loola xisaabtami doono. Xoogaga Awdal Stateway ku sugan yihiin gudaha iyo dibedda Awdal State.
Gebogebo ahaan, wuxuu Guddiga Dhexe ee Qabanqaabada Awdal State ku talinayaa:
1. In si degdeg ah oo shuruud la aan ah loo sii daayo dhammaan dadka Borama lagu xidhxidhay shalay.
2. In laga waantooboku tacadiga bulshada Awdal State.
Col. Xasan Rirash
Guggiga Dhexe ee Qabanqaabada Awdal State
This entry was posted on April 4, 2011 at 7:34 pm	and is filed under 1. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.